शनिवार - Gorkhapatra | Nepal's First News Organization
संसारमा धेरै नाम चलेका व्यापारी, खेलाडी, कलाकार, राजनीतिज्ञहरूको सम्बन्धविच्छेद भएको समाचार पढ्दै र सुन्दै आएका छौँ । एकथरी मानिस विवाहपछि हुने विभिन्न झन्झट तथा जिम्मेदारीबाट परै बस्न विवाह नै गर्दैनन् । विवाहपछि पनि सम्बन्धविच्छेदमा लाग्ने खर्च, बालबच्चाको हेरचाहमा लाग्ने खर्च यावत् कारणले बाँकी जीवन जसोतसो सँगै बिताउन बाध्य हुनेहरू पनि छन् । केही त सबैखाले सम्पर्क माध्यम बन्द गरेर कसैले थाहा नपाउने ठाउँमा एक्लो जीवन बिताउनेहरू पनि भेटिन्छन् ।
विमल कोइराला ठूलो घर छ, ठूलै बैठकप्रशस्तै कोठाहरू छन् र तिनै कोठाहरूमायताउति चहार्दै बसेका छन् एक दम्पतीसबथोक छ तर रित्ता छन्,फगत दलिन र भित्ता छन्,बाहिर एउटा भोको घरवारविहीनदुःखी स्वरमा मागिरहेछ,उसले देख्छ कि भनेर ढोका बन्द गरी सुतेका छन् ।सँगसँगै जस्तो जन्म्यौँसँगै हुक्र्यौं–बढ्यौँउमेर छिप्पिन थालेपछि म स्कुल जान थालेँक्रमशः कलेज र विश्वविद्यालयऊ भने गरिब बाबुको स्याहार गर्नश्रम गर्न थाली सानैदेखिर अहिले उसका छोराछोरीहरूउसले बाबुलाई स्याहारेझैँउसलाई स्याहारी बस्तै छन् ।हामीलाई गरिब–धनी भन्ने नै हुँदैन भनेर पढाइयोहामीलाई सबैलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ भन्ने सिकाइयोविद्रोह गर्ने तालिम दिइयो,मारकाट सिकाइयो,ऊ भने चालै नपाईभ¥याङ चढ्दै गयो र शिखरमा पुग्योआफू उक्लिसकेपछि भ¥याङ झा¥योहामी अझै तलबाट हेर्दैछौँऊ भने नदेखिने गरी बिलायो ।कोही सामरिक स्वार्थ बोकेरकोही सिमानामा पसल थापेरकोही स्रोत–साधनका निम्तिकोही सद्भावलाई कमजोरी ठानेरघुमाइरहेछन्–घुमाइरहेछन् फन्फनी हामी भने कहिले यता, कहिले उताअक्सर यता न उता ।
जीवनको तुना (कविता)
वस्तुतः खुसीका सुकोमल अश्रुसिन्धुहरू बग्दैछन् खड्कुलो र डेक्चीहरूमा
सस्तो हुँदै साहित्य
मानव सभ्यताको प्रथम उपलब्धि भनेकै उसमा साहित्य, संस्कृति र कलाको प्रादुर्भाव हुनु हो । जब मानव चेतनाको अङ्कुरण हुन थाल्यो, तबदेखि मानवमा दया, भावना र विचारले जन्म लिन थाल्यो । तिनै भावना र विचारहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने साधन बन्यो साहित्य । यसकारण बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै हो– व्यक्त वा अव्यक्त रूपमा मानवमा साहित्य, संस्कृति र कलाको अंश रहेन भने त्यो मानव पूर्ण मानव हुन सक्तैन । त्यही हो मानव धर्म र सभ्यताको पहिचान पनि ।
जीवनयात्राको मीठो अनुभूति
साहित्यकार सुधा भट्टराई ‘संस्मरण : यात्रा’ कृति लिएर पाठकसामु आउनुभएको छ । यो उहाँको दोस्रो कृति हो । यसभित्र उहाँले बाल्यकालदेखि हालसम्मका प्रमुख घटना, घुमघामका सम्झना सरल भाषामा रोचक तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । २००९ सालमा जन्मनुभएकी सुधाले पढाइको थालनी इलामको फिक्कलमा रहेको स्कुलबाट गर्नुभयो । त्यसबेला उहाँको परिवार जमिनदारको रूपमा चिनिन्थ्यो ।
झोङ गाउँको खल्वाट टाउको
जोमसोमबाट उत्तर र पूर्वतिर लागेपछि पहाड आफैँ बनेको छ– असीम कलाको अनुपम आकृति । कैयौँ खेल चलिरहेछन् पहाडमा । जनावर, मान्छे, सागर, सगर, धर्ती र समयका सबै खेल देखिन्छन् कुमारी पहाडमा । केही नभएर सबै देखिनु, सबै भएर केही नदेखिनु एउटा विचित्र शक्ति छ मुस्ताङे पहाडमा । हामी मुक्तिनाथनजिकैको रानीपौवामा खाना खाएर झोङ गाउँतिर लागेका छौँ । मुक्तिनाथबाट उत्तर पश्चिमतिरको अग्लो पहाडको काखमा छ झोङ गाउँ । पारि खिङ्गा गाउँतिरबाट र झारकोट गाउँबाट हेर्दा झोङ गाउँ पहाडमै टाँसिएका उडिल्ला ढुङ्गा अथवा खोँचमा उम्रिएको काठे च्याउको जत्थाजस्तो देखिन्छ । माटाकै गाह्रो, माटाकै जोडाइ, माटाकै छानो भएपछि पहाडकै प्रतिमूर्ति देखिने भै’गो घर ।
उड्न सक्नु चराको प्राकृतिक विशेषता हो । चराको यही बानीबाट प्रभावित भएर मान्छेले उडान भर्न सक्ने प्रविधि र यन्त्रको विकास गरेको होला । आज मान्छे पनि आकाशमा चराजस्तै उड्न सक्ने भएका छन् तर अझै पनि चराले गर्नेजस्तो नियमित र लामो दूरीको उडान, उडानको बेला बाटो पहिल्याउने तरिका, गन्तव्यको पूर्वजानकारी पाउने माध्यमजस्ता तथ्य भने पहिल्याउन सकिएको छैन ।
जिम्बाब्वेको ‘ए’ टिमसँग टी–२० र एकदिवसीय तीन–तीन खेलको शृङ्खला खेल्ने घोषणा हुँदा नेपालले शृङ्खला जित्ने सम्भावना देख्ने शायद कमै थिए किनभने नेपालले पहिलो पटक अहिलेसम्मकै बलियो प्रतिस्पर्धीसँग शृङ्खला खेल्न लागेको थियो । जिम्बाब्वे टेस्ट मान्यताप्राप्त राष्ट्र हो । हुन त जिम्बाब्वेको दोस्रो दर्जाको टिम हुँदा यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त शृङ्खला थिएन । नेपाल आउने जिम्बाब्वेको ‘ए’ टिममा स्टार खेलाडी पनि थिएनन् तर आठ जना त्यस्ता खेलाडी थिए, जसले जिम्बाब्वेको राष्ट्रिय टिमबाट टेस्ट अथवा एकदिवसीय खेल खेलिसकेका थिए । त्यसैले घरेलु मैदानमा नै भए पनि जिम्बाब्वेको चुनौती पार गर्न नेपाललाई कठिन हुने अनुमान गरिएको थियो तर नेपालले आफ्नो भूमिमा जिम्बाब्वे ‘ए’लाई शृङ्खला जित्न दिएन । वर्षाका कारण दुई खेल मात्र सम्भव भएको तीन खेलको टी–२० शृङ्खलामा नेपाल १–१ ले बराबरीमा रोकियो तर नेपालले एकदिवसीय शृङ्खला २–१ ले हात पारेर यस शृङ्खलालाई अविष्मरणीय बनायो । जिम्बाब्वे ‘ए’ टिमलाई हराएपछि नेपालको प्रशंसा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले समेत गरेका छन् ।
स्वदेशमा रोजगारी केही छैन भनेर विदेश जान मरिहत्ते गर्नेका लागि ज्ञानबहादुर बिसुराल गतिलो उदाहरण हुनुहुन्छ । करिब १३ वर्षको रोजगारीपछि व्यवसायमा आउनुभएका बिसुराल चितवनको कुखुरापालन (पोल्ट्री) क्षेत्रको एउटा परिचित नाम हो । विद्यालय तहमा पढ्दादेखि नै अरूको कुखुराको चल्ला उत्पादन फार्ममा काम गरेर सिकेको सीपबाट बिसुराल यो स्थानमा पुग्नु भएको हो । बिसुराल यो स्थानमा सजिलै कहाँ पुग्नुभएको हो र ! निरन्तरता र धर्यताले मात्र उहाँ यस क्षेत्रको अब्बल उद्यमी बन्न सफल हुनुभएको हो । पुख्र्यौली पेसा कृषि भए पनि युवा उमेरदेखि नै बिसुराल उद्योगतर्फ आकर्षित हुनुभयो । विशेषगरी १३ वर्षको जागिरे जीवनको अनुभव पनि उद्योगका लागि सहयोगी भएको महसुस उहाँले गर्नुभएको छ । चितवनमा रहेको शिखर पोल्ट्री विल्डिङ प्रालि नामको कुखुराका चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरी उद्योग मात्र होइन, उहाँको कुखुराको दाना उद्योग पनि छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जागिर खाँदा मेरा लागि मात्रै हुन्थ्यो, व्यवसायले धेरैका लागि रोजगारी दिएको छ ।’’
फगत मान्छे (कविता)
नारायण तिवारी म छु र चन्द्र सूर्य छन्म छु र खोलानाला छन्म छु र यो ब्रह्माण्ड छम छु र यो धर्ती छम छु र आकाश छ, आकाशको सुन्दरता छम छु र यो जीवन छ, जीवनको यात्रा छम छु र यो अनुपम सृष्टि छम छु र नदी छ, पहाड छ, हिमाल छम छु र अग्नि छ, जल छ, सारा चराचर छम छु र सपना छ, उज्यालो भविष्य छम छु र प्रकृति छ, रमणीय ताल छम छु र सारा संसार छ म नारायण तर, ईश्वर होइन मान्छे, फगत मान्छेम छु र ईश्वर पनि छम विना यो सारा संसार के, संसारको सुन्दरता के ?म विना यो संसारको सार्थकता के ?म विना संसारको सार के, ईश्वर के......?
शिव पलाँस मृत्युको विवेक हुँदैन मृत्युले उमेर गन्दैन ठूलो र सानो चिन्दैन असल र खराब भन्दैन । चुँडेर लान्छ फूल कैले कोपिला चुँड्छ कैले त मृत्युकै मृत्यु भई जाओस् श्राप दिन्छु मैले त आँखाको आँसु देख्दैन दिलको बिन्ती सुन्दैन ठूलो र सानो चिन्दैन असल र खराब भन्दैन । हुँदैन दौडेर, भागेर बाँचिन्न लुकेर, छिपेर कुन बेला कसलाई लाने हो के थाहा टप्प टिपेर जान्दैन कहिल्यै मृत्युले जीवनको मूल्य जान्दैन ठूलो र सानो चिन्दैन असल र खराब भन्दैन ।
पीपल वृक्षको पीडा (कविता)
लुमडी आचार्य उकाली, ओराली भञ्ज्याङ चौतारीवर–पीपल देखिने मुख्य हुन् ठाउँ यीकिरातकालमै प्रारम्भ भएको ऐतिहासिक सम्पदा चौतारी पनि हो । रुखहरूमध्येको निक्कै नै पवित्रनाम हो यसको वृक्षराज पीपल प्राकृतिक र धार्मिक सम्पदामध्येको अक्सिजन धेरै नै पाइने स्रोत यो ।रितो वा भरिया पैदल यात्रीको सुस्ताउने ठाउँ चौतारी पनि हो हुन्छ पूजा पीपलको सोम र शनिबारअरू दिनमा गरिन्छ नछोइ नमस्कार ।भैहाल्छ आयु सबै वृक्षहरूको पीपलको चाहिँ त विशासय होभएपछि पूरा समय सीमा यो झल्कने दृश्य देवी, गणेश शिवको ।यताउति हिँड्दा देखिनेमध्येको दाँयापारि हिँड्ने चौतारी पनि हो वृक्षराज पीपल देखिन्छ ढलेको बाटो विकास खातिर परिणाम होला यो ।
वसन्त काव्य उत्सवका चार दिन
मध्याह्नको समयमा पनि विराटनगर विमानस्थल टेक्दा पटक्कै गर्मीको अनुभव भएन । चार घण्टासम्म विमान उड्ने आशमा बसेका हामीहरू काठमाडौँको टर्मिनल कक्षमा गुम्सेर बस्दाको न्यानोपनमै गर्मी बिर्साउने हविगतमा पुगिसकेका थियौँ । त्यसमा पनि साहित्यकार गोकुल अधिकारीको हात हल्लाई र विवश पोखरलेको मुस्कानसहितको स्वागतले हामीले विराटनगरको गर्मी बिर्सिसकेका थियौँ । गुराँसको राजधानी तेह्रथुम र औद्योगिक नगरी विराटनगरमा कविता सुन्ने र सुनाउने कार्यक्रममा जाने उत्साहले जम्मा भएका थियौँ सबेरै त्रिभुवन विमानस्थलमा वैशाख ८ गते । एपेक नेपालको सक्रियतामा साहित्यकार विश्वविमोहन श्रेष्ठको सक्रियता र साहित्यकार राजेन्द्र शलभको सन्देश पछ्याएर । विराटनगर, धरान, वसन्तपुर, धनकुटामा साहित्यिक भेटघाट र सिर्जना सुन्ने योजना कता हो कता, मन जति वेगले दौडिए पनि हामीलाई लिएर जाने जहाजले मनलाई भन्दा धनलाई महìव दिएपछि समयसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयौँ । ३५ मिनेटको यात्रामा बल्लबल्ल एक गिलास पानी दिएर यात्रुको सेवामा तत्पर एयरको सेवा र समय हावा गफजस्तै लाग्यो । व्यापारको नाममा आफ्नै यात्रुलाई सास्ती दिने अपार व्यापार । बाटोमा पर्ने कतिपय ठाउँमा तय भएका कार्यक्रम, कायक्रममै सीमित भए, पकाएर राखेका खानासम्म खाने अवसर जुरेन ।